အဆိုပါ Facebook ကို support ကိုဆက်သွယ်မှဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါ Facebook ကို support ကိုဆက်သွယ်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ရွာ၏အောက်ခြေတွင်ခလုတ်တစ်ခုရှိပါတယ် အကူအညီ zhmte နှင့်မသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမဆိုဘို့တိုင်ကြားသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ် esch ပေါ်မဆိုအမှု၌, အဲဒီမှာနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက် poyavyatsya နှင့်အသုံးအများဆုံးပြဿနာများအားလုံးရိုးရိုးဟုတ်ကဲ့အဖြစ်နှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်ဖော်ပြသည်။
အောက်ခြေက Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် Mota ။
Next ကိုကျနော်တို့စကားလုံး Quote ရှာနေကြ၏ Pomoschquot; ။ ဒါဟာစာနယ်ဇင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျတုံ့ပြန်ချက်များအတွက်စာမျက်နှာကိုဖွင်။ သင်စိတ်ဝင်စားနေသည့်ဘာသာရပ်ကို select နှင့်စာတစ်စောင်ပေးပို့ဖို့ရှိသည်။
သင် tab ကို Quote ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ်စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံး; Pomoschquot; သငျတို့သတိုင်ကြားသို့မဟုတ်တစ်ခုခုမေးနိုငျဖြစ်စေရသောပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
တချိန်တည်းမှာပင်၊ Facebook ကိုထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်အတွက်သင်၏အယူခံသည်မကြာခဏအဖြေမရရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင့်ကိုအခြား ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ထံအဖြေပေးလိမ့်မည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည် သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်အတွက်ကောင်းသောအဖြေကိုလက်ခံရရှိပါကသို့မဟုတ်သင်၏တိုင်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်ပါကသင်အလွန်ကံကောင်းသည်ဟုသင်ယူဆနိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့, အရာအားလုံးကအရမ်းရိုးရှင်း !!! သငျသညျအဆုံးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်ရှိရာစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာတစ်ခလုတ်ကို Quote ရှိ၏ Pomoschquot; အဲဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သေတ္တာထဲတွင်တိုင်ကြားချက်တင်ပြရန်ပုံစံရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုငါတို့သည်သင်တို့ Quote ကူညီပေးနိုင်ပါသည် ... ?;; ယေဘုယျအားဖြင့်သင် string ကို Quote အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုရေးနိုင်ပါတယ်
သင်တန်း၏ facebook ကိုရှာတွေ့မှဆိုလိုသည်မှာလွယ်ကူသောထောက်ခံမှုန်ထမ်းများ, ရှိပါတယ်။ ညာဘက်ထိပ်မှာ drop-down menu ကိုလည်းမရှိ, က Quote မှတ်ရှိပါတယ်; Pomoschquot; နှင့် quote; အစီရင်ခံစာ problemequot; ။ ထိုအခါအကူအညီအတွက် Quote ဖွင့်လှစ်; အကူအညီ Center က Facebookquot; ။ တစ်ဦးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် cursor နှင့်အညီတိုက်ရိုက်သင်၏မေးခွန်းရေးရန်နှင့်အဖြေများအတွက်စောင့်ပါ။
သငျသညျစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှဆင်းရ Facebook ကို support ကိုဆက်သွယ်ရန်, ထို့နောက် Quote အဲဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ; pomoschquot; သင်ညာဘက်ယူရေး partition ကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ပုံစံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးသို့ဆင်းသွားပါ။ အကယ်. မြို့ရိုးပေါ်မှာမှတ်တမ်းများအများကြီးကစာမျက်နှာ Down နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤအမှုကိုအဆင်ပြေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအပိုင်း -“ Helpquot” ကိုရွေးပါ။
ထိုအခါလိုချင်သောအပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်အထူးလယ်ပြင်၌ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။ သင်တစ်ဦးတိုင်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ် comment ကိုပို့ချင်ပေမယ့်သင်ဌာနကို Quote ကိုသွားဖို့လိုအပ်လျှင်၎င်း, Zhalobyquot;
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အထောက်အပံ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်အမှန်ပင်မလွယ်ကူပါ။ စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိ“ Helpquot” ခလုတ်ကိုသာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ဖောင်ပုံစံတစ်မျိုးဖွင့်ပြီးမည်သည့်ပြproblemနာကိုမဆိုကူညီပံ့ပိုးရန်အဖွဲ့အားသင်အကူအညီတောင်းနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ပြnoနာမရှိပါဘူး - စာမျက်နှာကိုအဆုံးအထိလှိမ့်ပါ။ Quot; Helpquot; tab ဟာအောက်ခြေညာဘက်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ ၀ င်းဒိုးကိုနှိပ်ပါ။ သင်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ quote ကိုနှိပ်ပါ၊ တိုင်ကြားချက်ပေးပို့ပါ ၊၊ အကယ်၍ သင်သိလိုသည့်အချက်အလက်များ မေးခွန်းကိုထိပ်ရှိအကွက်ထဲတွင်ရေးပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အထောက်အပံ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။ အောက်ခြေမှာ HELP လို့ခေါ်တဲ့လင့်ခ်ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ တိကျတဲ့အပိုင်းကို select တွေနဲ့နှုတ်ထွက်အဖြစ်ဖြန့်ဝေပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့, သင့်ကို e-mail ကိုမှတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ပါ။ သူတို့ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာအပေါ်အလုပ်လုပ်လို့ပြောကြောင့်ဖြစ်သည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,330 စက္ကန့်ကျော် Generate ။